Cameron.....: June 2020
Posted by Cameron at 16:14 1 comment:
ဒီနှစ်က export မရှိလို့ စိန်တစ်လုံးသရက်သီးတွေ ဖောဖောသီသီစားရတယ်....။ ဈေးကွက်ထဲစဝင်တုန်းကတော့ တစ်လုံးကို ၈၀၀/- နောက်ပိုင်း တစ်လုံးကို ၂၀၀, ၃၀၀ ထိ ဈေးကျသွားတယ်...။ မန္တလေးနဲ့ ကျောက်ဆည်ဖက်ကထွက်တဲ့ စိန်တစ်လုံးကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့....။ အသားကကျောက်ကျောလိုချောပြီး အမျှင်မပါဘူး ချိုတယ် ဒါတွေက စိန်တစ်လုံးသရက်သီးရဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ အားသာချက်...။ တစ်ခုမကောင်းတာတော့ အချိုမတည့်တဲ့ အချိုစားလို့မရတဲ့ ရောဂါအခံရှိသူများ မစားကြနဲ့ပေါ့....။ နှလုံးသမားတို့ ဆီးချိုသမားတို့ကို ရှောင်ခိုင်းထားတာတော့ ဖတ်ဖူးတယ်...။
မူလ မန္တလေး ကျောက်ဆည်ဖက်ကပဲ အဓိကထွက်တယ်လို့သိရပေမယ့် နောက်ပိုင်း ပြည်တို့ ဘာတို့ဖက်ကထွက်တဲ့အသီးတွေလည်းရှိတယ်....။ အပြင်ဗန်းကကြည့်ရင်တော့ ပြည်စိန်တစ်လုံးဆို ဘယ်လောက်မှည့်မှည့် အခွံရောင်က ဝါဖျော့ဖျော့...။ မန်းတို့ ကျောက်ဆည်တို့ဖက်ကအသီးကတော့ အခွံက အဝါရင့်ရင့်....။ တချို့ဘယ်မြို့တွေကထွက်မှန်းမသိ ဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းတဲ့ အသီးတွေကတော့ အချိုပေါ့ပြီး အမျှင်များတယ်...။ ကျွန်မကတော့ တိုက်ရှေ့က သစ်သီးသည်ဆီက ဝယ်စားဖြစ်တာများတယ်....။
180g disgestive biscuits
160g fine sugar or powder sugar
Credit to the cooking foodie from you tube.
၈ လက်မအဝိုင်းရှိတဲ့ မုန့်ဖုတ်ခွက် (ဖြုတ်/တပ်လို့ရတဲ့ခွက်အရှင်) ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ထားပါ...။ ဘီစကစ်မုန့်ချပ်တွေိကို အိတ်တစ်ခုထဲထည့်ပြီး ကျေညက်အောင်ချေထားပါ...။ ဆလုံတစ်ခုထဲမှာ ဘီစကစ်အမှုန့်တွေကို ထောပတ်အရည်ပျော်နဲ့ရောပြီး မုန့်သားညက်တဲ့အထိနယ်ပေးပါ...။ ရလာတဲ့ဘီစကစ်အမှုန့်တွေကို မုန့်ဖုတ်ခွက်ထဲထည့်ခင်းပြီး ဖန်ခွက်ဖင်နဲပြားသိပ်နေအောင်ဖိပေးပါ...။ ပြီးရင် ရေခဲသေတ္တာထဲအအေးခံထားပါ...။
အခန်းအပူချိန်မှာထုတ်ထားတဲ့ cream cheese ကို ဇလုံသန့်သန့်တစ်ခုထဲထည့်ပြီး ယောင်းမနဲ့စေးပြီးပျော့လာအောင်နယ်ပေးပါ...။ စေးညက်လာတော့မှ သကြားထည့်ပြီး ထပ်မွှေပေးပါ...။ နောက် သရက်သီးအနှစ်နဲ့ ခရမ်ရောပြီး သမအောင်မွှေထားပါ...။ မုန့်သားညက်ပြီဆို အအေးခံထားတဲ့ မုန့်ဖုတ်ခွက်ထဲ အသာလောင်းထည့်လိုက်ပါ...။ ရေခဲသေတ္တာထဲ ခဏပြန်ထည့်ထားပါ...။
ပန်းကန်လုံးတစ်ခုမှာ gelatin ကို ရေနွေးငါးဇွန်းနဲ့ရောပြီး ဖျော်ထားပါ...။ မီးအရှိန်ပျော့ပျော့မှာ သရက်သီးနှစ် သကြားနဲ့ရေတို့ကိုရောကျိုပေးပါ အဆက်မပျက် မွှေပေးပါ...။ အိုးကပ်ပြီးတူးသွားမှာစိုးလို့ပါ... ဆူပွက်လာပြီဆို gelatin ဖျော်ထားတာနဲ့ လီမွန်ရည်လေးထည့်လိုက်ပါ မီးဖိုပေါ်ကချပါ....။ gelatin ‌တွေ သရက်သီးနှစ်ထဲပိုပျော်ဝင်သွားအောင် ဆက်မွှေပေးပါ....။ သရက်သီးနှစ်နဲနဲအေးပြီဆို cheese ပေါ်ဖြေးဖြေးလောင်းချလိုက်ပါ....။ မီးဖိုသုံးစရာမလိုတဲ့ အေးခဲတဲ့နည်းပေါ့...။ ရေခဲသေတ္တာထဲ အနည်းဆုံး ၃နာရီ ဒါမှမဟုတ် တစ်ညသိပ်ပြီး ခွဲစိပ်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ...။ ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းသလို မုန့်မျက်နှာပြင်မှာ သရက်သီးလေးထောင့်တုံးလေးတွေလှီးပြီး အပေါ်မှာအလှဆင်လို့ရပါတယ်...။
ဒီနှစ်စိန်တလုံးပေါလို့ သူ့ကိုအရင်းပြုပြီး မုန့်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလုပ်စားဖြစ်တယ်....။ နောက်တစ်ပို့စ်ကျရင် တခြားသရက်သီးမုန့်တွေကို ထပ်တင်ပါ့မယ်...။
Posted by Cameron at 15:53 1 comment:
ကျွန်မ ဒီပိတ်ရက်ရှည်မှာ Joox ကနေ နားမထောင်ဖူးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေတော်တော်များများကို နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်....။ အကောင်းဆုံး hip hop တေးများထဲက သူတို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်....။ ကျွန်မ hip hop နဲ့ Rap ဂီတကို ဟိုး ကိုမျိုးကျော့တို့ အက်စစ်တို့ခေတ်ကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တယ်....။ သူတို့နောက်ပိုင်း hip hop ကို တစိုက်မတ်မတ်မဟုတ်ဘဲ ကြုံသလိုပဲနားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်....။ ကြားထဲ ကြက်ဖတို့ J Me တို့ ဘာတို့လောက်တော့သိသေးတယ် ဆယ်စုနှစ်လောက်အလှမ်းဝေးပြီးနောက်ထွက်တွေထဲက Snare တို့ X-box တို့ လွှမ်းပိုင်တို့ကို သိခဲ့တယ်....။ Y-Zet နဲ့ Oasix ကိုတော့ ရှိုးပွဲတွေကြော်ငြာမှာ သူတို့နာမည်ကိုမြင်ဖူးခဲ့ပေမယ့် သူတို့သီချင်းကိုနားမထောင်ဖူးခဲ့ဘူး....။ နောက်ထွက်တဲ့ အသစ်တွေနဲ့အလှမ်းကွာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့...။
ခု Joox မှာ သူတို့သီချင်းတွေကို နားထောင်ဖြစ်တော့ အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေကို ဖုန်းထဲ ဒေါင်းလုတ်ထားတယ် အဖန်တလဲလဲနားထောင်ဖြစ်နေတယ်....။ အဲလိုနားထောင်ဖြစ်ရင်းနဲ့ပဲ Y-Zet နဲ့ Oasix ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုပြီး သိချင်လာမိတယ်...။ ဒါနဲ့ You Tube မှာ (ဖဘမသုံးတော့) သူတို့ အင်တာဗျူးတွေကို လိုက်ရှာကြည့်ဖြစ်တယ်...။ ကျွန်မ Joox မှာ အရင်ဆုံး သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကိုကြီးသီချင်းကနေ စနားထောင်ခဲ့ဖူးတာ...။ ကိုကြီးက အရမ်းပေါက်တယ်လေ....။ ညီမလေးတွေရော ကိုကြီးတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာပါ ကိုကြီး ကိုကြီးနဲ့ ရေပန်းစားနေခဲ့တာ အဲသီချင်းထွက်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်လကတည်းကနေ ခုထိပဲ....။ ကျွန်မသူတို့သီချင်းကို Joox မှာ အကုန်လုံးနားထောင်တယ်....။ ဒီပို့စ်မှာတော့ အများကြီးတင်မပေးတော့ဘူးနော်...။ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေက အများကြီးရှိပေမယ့်လေ....။
သူတို့ကို နောက်ပေါက်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကိုယ်တွေ ဘလော့စရေးကတည်းက သူတို့က ဂီတနယ်ပယ်ထဲကိုစဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ hip hop ဂီတကို အရမ်းရူးသွပ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေပေါ့...။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက မန္တလေးသားတွေ...။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက မန်းမှာ ခုနှစ်တန်းတစ်နှစ်တက်ခဲ့ဖူးတော့ မန္တလေးကို အဲတုန်းကတည်းက သံယောဇဉ်ရှိခဲ့တာ ဒီနေ့ထိပဲ..။ ရန်ကုန်နဲ့မတူတဲ့ မန္တလေးကစကားပြောတဲ့ လေသံကိုလည်း သိပ်သဘောကျခဲ့တယ်....။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင်မှ ၁၉၈၈ အရေးခင်းဖြစ်တော့ ကျောင်းသုံးလကျော်လေးလောက်တက်ခဲ့ရတာ ခုချိန်ထိ စကားပြောရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွန်တော်လို့စွဲသုံးနေတတ်တုန်း....။ စာရေးလို့သာ ကျွန်မလို့ရေးတာ...။ ဆိုတော့ကာ မန္တလေးသားအဆိုတော်တွေကို အားပေးပြီးသား....။ ရန်ကုန်အကြွား မန်းကစကား မော်လမြိုင်အစားလို့ အဆိုရှိတယ်မဟုတ်လား....။ မန္တလေးသားတွေ စကားပြောကောင်းတာ ဒါတင်ဘယ်ဟုတ်မလဲ သီချင်းတွေ ကဗျာတွေ စာတွေလဲအရေးကောင်းကြတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူး မဟုတ်လား...။ Y-Zet က ပြင်ဉီးလွင်သားဆိုပေမယ့် သီချင်းတွေလုပ်တော့ အိမ်ကထွက်လာပြီး မန္တလေးမှာပဲအနေများခဲ့တာဆိုတော့ မန္တလေသားတစ်ဝက်ဖြစ်နေပြီ...။ O ကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့ Oasix ကတော့ မန္တလေးသားစစ်စစ်....။ GTC ဆက်မတက်ဘဲ အီးမေဂျာနဲ့ ရတနာပုံကျောင်းဆင်း....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနုပညာရူးသွပ်ကြသူချင်း လိုင်းမတူပေမယ့် ကျွန်မကတော့သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှု ရူးသွပ်မှုတွေကို စာနာနားလည်မိတယ်...။ သီချင်းရေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့စာရေးတာထက် အများကြီးခက်တယ်....။ စာသားတစ်ခုထဲကို ခံစားရှာဖွေရတာမဟုတ်ဘဲ melody တွေပါထည့်ရသေးတာ....။ ရင်ဘတ်ထဲကမလာဘဲ ဘာမှဖန်တီးယူလို့မရဘူး...။ ဒါကြောင့် သီချင်းရေးသူ ဆိုသူတိုင်းကို တကယ်ပဲအားကျချီးကျူးမိတယ်...။
Y-Zet ရဲ့ Hope နဲ့ သူစိမ်း ကို အရမ်းကြိုက်တယ်....။ Hope မှာ Y-Zet ရဲ့စကားပြောအသံက ဒီသီချင်းမှာအသက်ပဲ....။ ဒီသီချင်းနားထောင်ဖူးတဲ့သူတော့ သိမှာပါ....။ ကိုယ်တွေက ခုမှစနားထောင်ဖူးလို့ ပြောပြတာ နားထောင်ဖူးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့....။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သီချင်းတွေအများကြီးနားထောင်ခဲ့ဖူးတာ ဒီလို သီချင်းတွေထဲက စကားပြောနေရာမှာ Y-Zet အသံက အမိုက်ဆုံးပဲ တကယ်ကြိုက်တယ်....။ စာသားတွေကလည်း တကယ်ထိတယ်...။ Hope ရော သူစိမ်းရော Y-Zet နဲ့ ဇာနည်ချစ်ရေးတာ....။ Hope မှာမယ်လိုဒီက နှစ်ပိုဒ်လောက်ပါတာ စကားတွေအများကြီးပြောသွားတာကိုက ဒီသီချင်းလေးအတွက် တကယ့်အသက်ပါ....။ "သူ ကျွန်တော့်ကိုမေးဖူးတယ် ထွက်ခွာသွားတဲ့သူနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့သူ ဘယ်သူကပိုလွမ်းလဲတဲ့.... ကျွန်တော်.....ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ သိလား " "ပင်လယ်ကြီးကို ဘယ်သူမှမပိုင်ဆိုင်ကြဘူး ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် ပင်လယ်ကြီးကိုတေွ့ရင် ပျော်ကြတယ် ပင်လယ်ကြီးကိုချစ်ကြတယ်...အဲဒီတော့ ပိုင်ဆိုင်ရမှ အချစ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်လာတယ်...." OMG!!!! အဲဒီစာသားတွေကို ရွတ်သွားတဲ့ အသံနေအသံထားနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ music လေးက အရမ်းမိုက်တာပဲ....။ ဂီတအကြောင်း ကဂနဏ နားမလည်လို့ သေချာမရှင်းပြတတ်ဘူး နားထောင်ကြည့်ရင်တော့ ခံစားမိနိုင်ကြမှာပါ....။ သူစိမ်းမှာကျတော့ Y-Zet က Rapping အပိုင်းယူထားပြီး ဇာနည်ချစ်ရဲ့ အက်ရှရှ melody ကလည်း အမိုက်စားပါဆို....။
Oကြီးအသံကျတော့ ချစ်စရာကောင်းတယ်......မျက်နှာချိုတယ် လူငယ်ဆန်တယ်....။ ခုနောက်ဆုံး Joox မှာ နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ "ငါမေ့လိုက်ပြီ" လဲကောင်းတယ်...။ "ရဲရင့်လိုက်" ကိုလည်းအရမ်းကြိုက်တယ်... O ကြီးရဲ့ Rapping ရော မယ်လိုဒီကိုရော အရမ်းမိုက်...(melody က အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်ထင်တယ် နာမည်မထိုးထားတော့ သိပ်မသေချာဘူး)...။ ကျွန်မအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့ ဒီလို ခပ်အေးအေး ခပ်ဆွေးဆွေးသီချင်းတွေကိုပဲ နားထောင်လို့ရတော့တာလေ ခပ်ဆူဆူကြမ်းကြမ်းတွေကို ငယ်ကတည်းကလဲ မကြိုက်ခဲ့ဘူး...။ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်နားထောင်ကြည့်ရင်း ဒီမန္တလေးသား Rapper နှစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းပြောပါရစေ....။ ဘယ်ဆယ်လီကိုမှမကပ် အားမကိုးဘဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး သီချင်းအပေါ်သစ္စာရှိရှိ ရူးသွပ်ကြတဲ့ သူတို့လေးတွေကို (သူတို့အမာခံပရိတ်သတ်ရှိပြီးသားပေမယ့်လည်း) ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး မသိသေးသူတွေ သူတို့သီချင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပြီး အားပေးကြပါဉီးလို့ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်....။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက Instagram မှာ Y-Zet နဲ့ Oasix ကို follow ထားတယ်....။ ပြီးတော့ သူတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ Feb 22 ရက်နေ့တုန်းက သုဝဏ္ဏဘူမိမှာလုပ်သွားတဲ့ Joox top 100 show ပွဲမှာပါဝင်ပါသေးတယ်....။ သူတို့က မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပွဲတွေကို လက်မလည်အောင်ကို တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့လိုက်ဖျော်ဖြေရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော်တွေလည်းဟုတ်တယ်....။
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Oကြီးအသံကို hip hop နဲ့မလိုက်ဘူး ဘာလို့ hip hop ကိုရွေးလဲလို့ ပရိတ်သတ်တချို့မေးထားတာကိုကြည့်ရတယ်...။ ဟုတ်တယ် အဲဒီအကြောင်းလေးနဲနဲပြောချင်တယ် Y-Zet ရော Oasix ရောပဲ သူတို့က hip hop လိုင်းကိုရွေးခဲ့တာဆိုပေမယ့် melody ကိုလည်း ပျံလန်နေအောင် အမိုက်စားအဆိုကောင်းတဲ့သူတွေလို့ နားထောင်သမျှ သတိထားမိခဲ့တယ်....။ Rapper တော်တော်များများ Rap ရွတ်တာကောင်းပေမည့် melody မပိုင်တဲ့သူတွေကအများကြီးရယ်....။ ပြီးတော့ Rap ရွတ်ရင်တချို့ စကားလုံးမပီသဘဲ ဝါးပြီးလုံးနေတာ နားထောင်ရင်နားမလည်တာများတယ် ...။ ဒီဘဲကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ Rap ရွတ်သံကတော့ ပီသကြည်မြ နားထောင်ရင်တခါတည်းသိတယ်...။ အဲဒါလေးတော့ ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်....။ Y-Zet ဆိုရင် Rapper အဆိုရှင်တစ်ယောက်လို့သာဆိုတယ် သူ့စတိုင်လ်က Rocker ဆန်တယ်... ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ဖြဲမယ်ဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်းအမြဲဖမ်းထားတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အပြင်မှာတော့ အနေအေးမယ့်ပုံပဲလို့ အင်တာဗျူးလေးတွေကို ကြည့်ရင်းခန့်မှန်းမိတယ်....။ Oကြီးကတော့ အသားညိုညို အဆိုတော်စဖြစ်ကတည်းက အဲဒီအသားကိုပဲ အတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလို့ အင်တာဗျူးတွေမှာပြောခဲ့တာ သိရတယ်...။ အသားအရောင်ခွဲခြားတဲ့ ရုပ်ဝါဒီဆန်တဲ့သူတွေကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက်ရှိနေဉီးမှာပဲ သိပ်ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး ကိုယ့်ဝါသနာ ကိုယ့်ရူးသွပ်မှု ကိုယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်တွေ အချိန်တွေ ငွေတွေ လူမသိသူမသိအငတ်ခံခဲ့ရတာတွေ အနှိမ်ခံခဲ့ရတာတွေ အတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာတွေကို ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်သာအသိဆုံး ဘယ်သူမှ သူများတကာပိုင်တဲ့ဘဝကို ဝင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး....။ ကိုယ်ယုံကြည်ရူးသွပ်တဲ့ လမ်းကြောင်းကိုသာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလျှောက်လှမ်းပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာကိုဆက်ကြိုးစားပါ ထိန်းသိမ်းပါလို့ပြောချင်တယ်....။ သီချင်းကောင်းတွေကိုလည်း ဆက်လက်ပြီး ရေးသားသီဆိုပါလို့ ဒီပို့စ်လေးနဲ့အားပေးလိုက်ပါတယ်နော်....။
ကျွန်မက သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးအသစ်စက်စက် Fan တစ်ယောက်ဆိုတော့...။
Lol!! သူတို့ Fan တွေထဲမှာ ကျွန်မက အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာလေ...။
ကျွန်မရေးထားတဲ့အထဲက information အမှားတစ်ခုခုပါသွားရင် ကော်မန့်မှာလာပြောနိုင်ပါတယ်နော်...။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် I love you guys, Y-Zet and Oasix
သူစိမ်း (Y-Zet + Zarni Chit)
ပြောစမ်းပါ featuring shwe Htoo and Alatt
Y-Zet & Oasix ရဲ့ ပြောစမ်းပါ ဆိုတဲ့ အမ်ဘမ်ထဲက "လက်တွဲဖော်"
Oကြီးနဲ့ KMH တို့နှစ်ယောက်ထွက်ထားတဲ့ X အမ်ဘမ်ထဲက ခုထိလူကြိုက်များနေဆဲ ကိုကြီး
Joox မှာနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ Oasix ရဲ့ သီချင်းလေး
သခွားသီးထောင်း ကောက်ညှင်းပေါင်း ပလာတူးငါးကြော် ဝက်သားပေါင်း ဆီတိုဖူး နဲ့ ဒူးရင်းသီး
ချဉ်ပေါင်နဲ့မျှစ်ကြော်ထားလို့ ထမင်းနဲ့နယ် ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ ချဉ်ပေါင်ဇလုံထမင်းနယ်ကို ကြက်သားရို့စ်နဲ့ အာလူးကြော်လေးနဲ့ အောင်မလေး ဆွေမျိုးမေ့
ငါးမြင်းဆီပြန်ဟင်း မကျည်းချဉ်ရည် ပဲတောင့်ရှည်ကြော် အာလူးပဲကြာဇံသုပ်
ငါးပိရည်ဆိုရင် ဘယ်ချိန်စားစား စားကောင်းနေတာ ငါးပိရည်ထမင်းနယ်နဲ့ ကြက်ကြွပ်ကြော် စွန်ထန်ဟင်းရည်
ရှမ်းဆန်လေးကျန်နေသေးလို့ ရှမ်းထမင်းချဉ်လေးလုပ်စားတယ် အာလူးထောင်းနဲ့ ငရုတ်သီးမီးကျွမ်းကြော်နဲ့
ကြက်ကြောလုံး ဝက်အူချောင်း အပ်မှို သွားသီး ရုန်းပဒေသီး အာလူး ပဲပြား ဒညင်းသီး အစုံပဲ
တို့စားဖို့အချဉ်ရည်ကို you tube ကကြည့်ပြီး ရှယ်လုပ်ထားတာ
သခွားသီးထောင်းစပ်စပ် အရည်ရွှဲရွှဲနဲ့ မုန့်ဖတ်နဲ့စားမယ်
စတော်ဗယ်ရီကို အမြဲနို့နံသကြားနဲ့ပဲဖျော်တာရိုးနေပြီး ဒီတခါ ငံပြာရည်ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ သုပ်စားတယ်လေ
သင်္ကြန်မရှိပေမယ့် အစဉ်လာမပျက် မုန့်လုံးရေပေါ်လေးတော့လုံးပြီး ဘုရားကပ်
No Bake Mango Cheese Cake လုပ်နည်းလေး ပို့စ်သပ်သပ်တင်ပါ့မယ်
စားကောင်းလို့ ညီမလေးယောက်ျားကို သုံးစိပ်ပေးလိုက်တာ
သူက တစ်ပတ်လုံးကုန်မှာစိုးလို့ ဇွန်းလေးနဲ့ နည်းနည်းဆီဖဲ့စားတာတဲ့ကဲ
Posted by Cameron at 14:36 1 comment: